Ọrụ Onwe-onye ma ọ bụ -nye ọnụahịa Bara Uru - Ọ ka bụ ihe ahụmịhe ahụ | Martech Zone
Ahịa Onwe-Onwe ma ọ bụ -nye ọnụahịa Bara Uru - Ọ bụ ihe gbasara Ahụmahụ
Fraịde, Septemba 9, 2016 Tọzdee, Septemba 22, 2016 Douglas Karr
N'abalị ụnyaahụ, agara m mmemme nke PactSafe mere. PactSafe bụ ígwé ojii dabeere na igwe ojii ịgbanye n'elu ikpo okwu na clickwrap API maka Saas na eCommerce. Ọ bụ otu n'ime nyiwe SaaS ahụ ebe m zutere onye guzobere ya ka ọ na-agbago ma ugbu a ọhụụ Brian bụzi eziokwu - na-atọ ụtọ.
Onye kwuru okwu na mmemme ahụ bụ Aha ya bụ Scott McCorkle nke Salesforce a ma ama ebe ọ bụ onye isi nke Salesforce Marketing Cloud. Enwere m obi ụtọ ịrụ ọrụ maka Scott na Salesforce, ọ bụkwa nnukwu ahụmịhe mmụta. Scott bụ otu n'ime ndị isi ahụ na-achọta ụzọ iji bulie ngwaahịa na ụlọ ọrụ ahụ gaa n'ihu n'agbanyeghị ihe mgbochi ọ bụla n'ụzọ - mmadụ ma ọ bụ teknụzụ.
Otu n'ime isi ihe Scott kwuru n'oge mkparịta ụka ya bụ na teknụzụ teknụzụ na-agbada ngwa ngwa na mkpa ya, yana ahụmịhe ahịa na-arị elu. Anyị nwere nnọkọ nkwụsịtụ na tebụl anyị ebe Scott na-akọrọ akụkọ mgbe akụkọ gasịrị ebe nke a mere na ndị ahịa Salesforce na ExactTarget.
Ọnụahịa ọha na eze na ọnụahịa bara uru bara uru
Mkparịta ụka ahụ tụgharịrị gaa na mkparịta ụka banyere ọnụahịa ọha na eze na ire ahịa onwe onye na ire ahịa ọpụpụ na ọnụahịa bara uru. N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ na SaaS na ụdị abụọ ahụ, akọrọ m ahụmịhe m na nke ọ bụla. M gbara ume okpokoro ibudata ma gụọ akwụkwọ ntanetị nke Mike McDerment, Gbaji Ihe Mgbochi Oge (ọ bụ n'efu).
Nye ọnụahịa chọrọ ego ma ọ bụ nnukwu uru iji mee ka ụlọ ọrụ na-eto eto. Ọ bụrụ n’inweghị oke oke, ị ga - eto n’iru. Nke ahụ nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụlọ ọrụ gị kpachapụ anya, ụgwọ akwụghị ụgwọ. Ma uto nwayọ na-ebute ihe egwu. N'oge ihe mgbochi ịbanye maka ịchọta ihe ngwọta dị ọnụ ala ma ọ bụ iwulite nke gị, ọ na-aghọ nnukwu eziokwu, ahịa nwere ike ịgafe gị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n'elu ikpo okwu SaaS taa, ohere ọ bụ bụ na ị ga-akụ ihe mgbe ígwè dị ọkụ. Dị ka Scott si kwuo ya, ị ga-adị njikere ime ka imi gị bụrụ ọbara.
Ọnụahịa dabere na ọnụahịa na-enye gị ohere ịnweta nnukwu uru site na ikwe ka onye ahịa gị kwụọ ụgwọ ngwaahịa na ọrụ gị karịa ịnye ya ọnụahịa. Kwụ ụgwọ ọnụahịa nwere ike ịbụ agbụrụ n'isi ma ọ bụrụ na ndị asọmpi pụta - nke ha na-emekarị. Basednye ọnụahịa bara uru nwere ike inye oke na isi ego ị nwere ike iji maka uto. Ihe dị iche na ihe ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enye ikikere ExactTarget maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ bụ nke na-agbanwe agbanwe n'oge ụfọdụ. Ọ bụ ezie na e nwere usoro ntọala, ọ dịghị onye a gbara ume ka ọ daba n'okpuru, enweghị ụlọ. Yabụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na-ahụ maka ọrụ zuru ụwa ọnụ nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa ozi ọ bụla karịa obere azụmaahịa edebara aha na ụbọchị ikpeazụ nke ahịa ahịa.
Industrylọ ọrụ email bụ usoro nke atụmatụ abụọ ahụ. Ndị na-egwu egwu dị ka Mailchimp nwere ụdị ọnụahịa ọhaneze, ebe ExactTarget nwere ọnụahịa dabere na uru. Ulo oru abuo a gbawara na ekele site na oke ahia na oru di egwu - mana n'ikpeazụ ExactTarget meriri n'ọsọ ahụ, na-eloda ụlọ ọrụ ahịa ma Salesforce zụtara ya. Uru bara uru na ire ahịa ike ike na-eme ka itinyekwu ego na ụlọ ọrụ - na ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Ntụkwasị obi na Ikike
Enweela m tupu oge ahụ ịre ahịa n'ịntanetị chọrọ ntụkwasị obi na ikike. Na akụkọ banyere MailChimp na ExactTarget, ụlọ ọrụ ahụ ghọtara ha abụọ. ExactTarget rụsiri ọrụ ike iji nweta mmata site na akụkọ ụlọ ọrụ dịka Gartner na Forrester. Ha rụkwara ọrụ ndị na-achụ nnukwu RFP, Scott kesara akụkọ ebe ha meriri 5 n'ime 5 RFP nke mesiri ụlọ ọrụ ike, mana ebe ha mechara nwee ọganiihu. Dika ExactTarget meriri nnukwu ndi ahia, ha nyere ndi mmadu ahia ka ha nweta otutu ahia. Ha nwekwara otu ndi nlekota oru nlekota oru nke wuru nmekorita anya na ndi isi ulo oru.
N'ihe banyere Mailchimp, ha dabere na ahịa ọrụ onwe ha, njirimara ndị ọrụ kachasị elu, akara ọchị, na ngalaba ọrụ na-anabata. N'ezie, mgbe m mepere nke anyị DK New Media Ọfịs, enwetara m igbe onyinye dị egwu sitere na Mailchimp na-ekele m. Anụghị m ihe ọ bụla site na ExactTarget (nke ahụ abụghị nkatọ, anọghị m na ndepụta aha ha). Mailchimp nọ na-ege ntị na mgbasa ozi mgbasa ozi, mara m dị ka onye na-emetụta ihe, ma mara na m ga-agbasa ha ozi ahụ.
MailChimp na ExactTarget rụchara ọrụ iji mepụta ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche. Teknụzụ dị oke mkpa. Companieslọ ọrụ abụọ ahụ na-ezipụ ozi elektrọnik. Ntinye nke ExactTarget na nnyefe ya n'oge gara aga bụ nnukwu ụlọ ọrụ si n'aka ndị ahịa ụlọ ọrụ, mana n'afọ ndị ikpeazụ ọ bụ njikwa akaụntụ na ikike ịmepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume maka ndị ahịa ụwa. Ha nwere ikike, wee wulite ntụkwasị obi site n'ịrụ ọrụ ahụ.
Ọrụ onwe gị na ndị otu ahịa
Onwe-ọrụ bụ kpam kpam inbound ahụmahụ na-achọ ihe dị ịtụnanya ika na a tidal ife nke mmata online. Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa kachasị elu, ị nwere ike imeri ahịa ahụ. Ekwenyere m slack emeela nke a. Ebe ọ bụ na anyị nwere ndị ọrụ nkwekọrịta anyị na ha na-arụ ọrụ na nke na arụpụtaghị ọrụ, ọ tụrụ m n'anya oge mbụ m nwetara akwụkwọ ozi n'aka Slack na ha kwụghachiri m ego maka ndị ọrụ na-enyochaghị. Kedu ka nke ahụ si dị mma? Chefuo ngwà; Enwere m ịhụnanya na ahụmịhe ahụ. (Ghara ịtinye ịgbakwunye giphy mwepu nke na-eme ka ịchị ọchị na-asọ ụbọchị niile)
Slack abanyekwala na ụlọ ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ n'eziokwu ihe anyị na-anaghị ahụkarị na ikpo okwu ọrụ onwe onye. C-Suite na-esikarị ike ịbanye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdịnaya. Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ ire n'ime C-Suite, anyị na-elekarị anya na ohere ndị mmadụ dịka nri abalị, nzukọ, na ohere ndị ọzọ. Slack bụ ihe ọzọ mana o nwere nzube nke nzube, nnukwu ahụmịhe ngwaahịa, ọnụahịa na uru, yana ọtụtụ ntinye ego nke mepụtara PR na-efegharị n'ịntanetị. Nke ahụ siri ike ịme.
Otu ahia nwere ghọrọ usoro. Anyị atụlewo ire ahịa mmadụ n'ogologo, ị ga-ahụ akwụkwọ akụkọ na-adịghị anya site na anyị nwere ohere ụfọdụ maka ọzụzụ. Mmadu aghaghi icheta na njem ndi ahia n'oge a emeela ka oge nke eziokwu abanye na ulo oru nke ulo oru. Fọdụ ndị na-ere ahịa kwenyere n'ụzọ na-ezighị ezi na-eme ka ndị na-ere ahịa na-atụ ahịa ahịa. N'aka nke ọzọ, ndị na-ere ahịa ga-adị nkọ karịa mgbe ọ bụla n'ihi na atụmanya ọ bụla emeela nyocha ha naanị kpọtụrụ ha na ngwụcha oge ịzụ ahịa. Ndị na-ere ahịa anọghị ebe ahụ ịkụziri onye ahịa ya; nke a na-emeworị. Ndị ahịa gị dị n’ebe ahụ iji merie nsogbu ndị kacha sie ike.
Otu ahia na-abụkarị ngwakọta nke talent.
Otu dị iche iche nwere ndị na - eto eto, ndị ahịa ọhụụ na - agbasi ike ma ghara ịza azịza ọ bụla. Ebe ọ bụ na ọ naghị amasị m ịkpa nkata, akpọrọ m ihu na ndị a. M ga-eleghara oku ha na ozi ịntanetị ogologo ụbọchị dum n'ihi na ha na-agwa m okwu n'ime ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị m na-achọghị. Ahịa ndị a nwere ike ime ka nkeji iri na ise gị, mana oge na-aga, ha na-ebibi ahụmịhe nke ika gị.
Ndị maara ihe, ndị isi ụlọ ọrụ nwere Rolodex zuru oke nke ndị ahịa ha nwere ike ree ugboro ugboro n'ihi na ha ewulite ntụkwasị obi na ndị ahụ zụrụ ahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla ha rụgoro. Ndị ahịa a bụ ọkacha mmasị m n'ihi na ha ghọtara uru ngwọta ha nwere ike iwetara m, m tụkwasịrị ha obi ịkwụ ya ụgwọ dịka mkpa m si dị. Ha agaghị etinye ihe ize ndụ ire m ihe m na-achọghị n'ihi na ha agaghị emebi ntụkwasị obi ahụ. Na ha bụ ịkparịta ụka n'networkntanet ma ha nwere ike ree m ihe ma ọ bụ na ha agaghị ere.
Ihe niile gbadara na ahụmịhe azụmahịa gị na -emepụta. Nke ahụ nwere ike ịbụ ahụmịhe ọhụụ site na ngwaahịa dị elu, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ ahụmịhe nke onwe site na ọrụ mmadụ nke ị nwere n'ime. Imirikiti oge, ngwaahịa ndị na-arụrụ onwe ha chọrọ ọtụtụ itinye ego na ahụmịhe onye ọrụ, yana obere ma ọ bụ enweghị ohere maka nkụda mmụọ n'ihi na ndị ọrụ gị họọrọ gị n'ihi na ha emeghị chọrọ ịgwa mmadụ okwu.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchekwa ego site na mbenata ike ịre mmadụ, ị ga-etinye nnukwu ego na ịmepụta ahụmịhe ka elu, na-akwalite oke okwu ọnụ, yana ịmara mmata site na mmekọrịta ọha na eze iji nweta okwu ahụ. Nke ahụ adịghị ọnụ ala. Ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ikpo okwu gị n'ụzọ siri ike ịsọ mpi n'ọma ahịa, ị nwere ike ọ gaghị ezu ezu itinye ego na azụmaahịa dị mkpa.
Ahụmịhe ngwaahịa bara uru n'ezie nwere ike imeri mmefu ahịa, mana nke ahụ bụ nsọ dị nsọ nke azụmaahịa ngwaahịa. Ohere bụ, ịkwesịrị ịnwe oke dị mma iji weta ihe ọrụ mmadụ dị mkpa iji merie adịghị ike ọ bụla ma hụ na ndị ahịa gị nwere ihe ịga nke ọma. Pricnye ọnụahịa bara uru nwere ike ịbụ nhọrọ ka mma n'ọtụtụ ọnọdụ.
Tags: ikikeike briankpachaara anyamailchimppactsafesaasire ahịaNkwado ire ahịandị ahịascott mccorkleọrụ onwe gị saasslacktụkwasị obiọnụahịa bara uruọnụahịa dabere na ọnụahịa
TidyMarketer: Saa-Marketing Saa-niile na Otu n’ime Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Kedu ihe ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, kwenyesiri ike na nnabata abụọ?
Eric Ikechukwu (@okpalenwa)
Sep 22, 2016 na 4:33 PM
Akwa post, Doug. Anyị hụrụ anyị n'anya ịnwe gị-ma ekwenyere m, echekwara m na akụkụ ya na-agbadata mgbagwoju anya nke ọnụahịa na ịdị njikere ịmalite maka ụlọ ọrụ ndị bidoro otu ụzọ mana ha nwere ike ịnwe ngwaahịa ka mma karịa nke ọzọ.
Sep 22, 2016 na 7:19 PM